Science (hard) Archives - Pgljapan
Translator: Elise LECAMP Reviewer: Denise RQ We live in exceptional times. There have never been more scientists on this planet than today, and they are making scientific breakthroughs at an exponential rate. Every year, the world spends 2.3 trillion US dollars to fund 8 million scientists. We do all of this so we can live Read more about Open Science can save the planet | Kamila MARKRAM | TEDxBrussels[…]
Posted in Articles, BlogTagged and, belgium, English, Science, Science (hard), TEDxTalks, that, The8 Comments
Translator: Ei Kay Thwe KhineReviewer: Myo Aung (လက်ခုပ်သံများ) ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ (မင်္ဂလာပါ။) ခုမှပဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ ပြေသွားတော့တယ်။ ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက “မျှော်လင့်ချက်က ဖိတ်ကြားနေတယ်”ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အလယ်တန်းကျောင်းတုန်းကကျွန်တော့်အမေ ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။ “ကိုယ်မျှော်လင့်ရင် တကယ်ဖြစ်လာမယ်“အဓိပ္ပါယ်ပါ မျှော်လင့်ချက်ကို မဆုံးရှုံးမိရန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီဟောပြောချက်ဖြင့် မိတ်ဆွေဖြစ်လာကြမယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာပါ့။ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၇ နှစ်တုန်းကကျွန်တော့်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် နာမည်က Uematsu Tsutomu ပါ။ ကျွန်တော်ဟာ ဟော့ကိုင်းဒိုး အလယ်ပိုင်းရှိအာကဘိရ မြို့မှာ ကျွန်တော့ တစ်သက်တာမှာ ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီကို လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်ပြီးသုံးရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်တွေကို ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ အာကာသ ဒုံးပျံများကိုလည်း Read more about Hope invites | Tsutomu Uematsu | TEDxSapporo[…]
Posted in ArticlesTagged Astronomy/Space, Career/Life Development, energy, japan, japanese, lifestyle, Science (hard), ted, ted talk, ted talks, ted x, tedx, tedx talk, tedx talks, TEDxTalks38 Comments
what is the worst thing that could happen if we would stop trusting science think about that well as we all know science is incredible powerful to to change our societies simply takealook at the technology around you or listen to the many TED talks about new inventions but in this era of Read more about Building bridges between science and society forabetter future. | Nadine Bongaerts | TEDxSaclay[…]
Posted in ArticlesTagged 3D Technology, English, France, schools, Science (hard), Society, TEDxTalks1 Comment